Nagu saabsan - Suzhou Kudi Trade Co., ltd.
Suzhou Kudi Trade Co., ltd. waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soosaara qalabka xayawaanka lagu xanaaneeyo iyo xaragada eyga ee laga noqon karo Shiinaha waxaanan ku takhasusay arimahan in ka badan 19 sano. Warshadeenu waxay ku yaalay Suzhou, taas oo kaliya nus saac u jirta tareenka kana soo degaya garoonka diyaaradaha ee Shanghai Hongqiao. Waxaan leenahay labo wershadood oo u gaar ah aaladaha xayawaanka lagu xanaaneeyo iyo leysaska eyda laga celin karo, silsilado iyo alaabta lagu ciyaaro xayawaanka oo wadar ahaan wax soo saar ka badan 9000 mitir murabac ah. Waxaan haynaa WALMART Walgreen, Sedex P4, BSCI, BRC iyo ISO9001audit ect. Waxaan haynaa wadar shaqaale ku dhow 230 illaa iyo hadda.
Waxaan hadda haysannaa kudhowaad 800 sku iyo 130 shey oo shatiyeysan. Maaddaama aan hadda hal-abuurnimadu tahay furaha badeecadaha, sidaas darteed sannad kasta waxaan ku maalgelin doonnaa qiyaastii 20% faa'iidadayada R & D waxyaabaha cusub oo aan si joogto ah ugu abuureyno alaab ka wanaagsan xayawaanka. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haysannaa kudhowaad 25 dad ah R&D tem waxaanan qorsheyn karnaa 20-30 walxo cusub sanad kasta. Labada OEM iyo ODM waa la aqbali karaa in our warshad.
Sidoo kale tayada sidoo kale waa waxa aan markasta diirada saarey. Waxaan had iyo jeer u soo bandhignaa macaamiisheenna dammaanad 2 sano ah oo alaabada ah si loo hubiyo tayadeena.
Macaamiishayadu waxay ka kala yimaadeen in ka badan 35 dal iyo gobol. EU iyo waqooyiga Ameerika waa suuqgeena ugu weyn. Waxaan u adeegnay in kabadan 2000 oo macaamiil ah, oo ay kujiraan Walmart, Walgreen, Central & Garden xayawaanka iwm Waxaan si joogto ah u booqan doonnaa macaamiisheena waaweyn mararka qaar oo aan is dhaafsano qorshooyin istiraatiijiyadeed oo mustaqbalka ah si aan u hubino iskaashi waara oo waara.
Hadafkeenu waa inaan siinno xayawaanka jacayl dheeri ah, inaan baarno oo aan horumarinno alaabooyinka hal-abuurka leh, abuurno nolol aad ugu habboon oo raaxo leh dadka iyo xayawaanka. Waxaan ku faraxsanahay inaan siino macaamiisheena alaab qurux badan iyo xalal badan oo wax ku ool ah iyo xalal dhaqaale nolol maalmeedkooda.
Ku soo dhawow booqashadaada! Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno!